Vaovao - SXY-M-FS550 ny tatitra momba ny milina famaohana lalina sy vovoka
Vao tsy ela akory izay, ny andiany voalohany amin'ny fitaovam-pambolena vaovao 10 novolavolain'ny orinasa Hebei Xuangong, ilay fifehezana tena lavitra FS550 tanimboly lalina mamaky sy mamaha mpamboly, dia nahomby tamin'ny famokarana. Ity maodely ity dia mety amin'ny fandidiana any amin'ny faritra be tendrombohitra sy be havoana ary manana vinan'ny tsena malalaka.
Mikendry ny sehatry ny fampandrosoana lehibe ny fambolena vaovao amin'ny fireneko amin'ny ho avy, ny orinasanay dia namolavola FS770 lehibe sy manan-tsaina FS550 tanimboly lalina mamaky sy mamaha ireo mpamboly, miantehitra amin'ny teknolojia famokarana mekanika lalina. Ilay mpamboly manan-tsaina FS550 ivelan'ny tsipika dia misy rafitra famokarana lalina any ambanin'ny tany. Ity rafitra ity dia mampiasa karazana boribory boribory marolafy vaovao, izay ahodina amin'ny tany amin'ny hafainganam-pandeha maherin'ny 40 cm, ary mandroso haingana hanangona ireo takelaka amin'ny tany, hiasa ny sosona ambany ary hiasa ny tany. Ny rhizome zavamaniry dia potipotehina ho vovoka granular avy hatrany, izay mampiroborobo ny fizarana ara-dalàna ny otrikaina amin'ny tany, izay manamora ny famokarana sy ny fitomboan'ny zavamiaina bitika ary mampitombo ny halalin'ny fakany zavamaniry, izay mora amin'ny fakany ny mifoka sy mampiasa otrikaina. Ny mpamboly FS550 dia mandray teknolojia fifandraisana amin'ny solosaina finday tsy misy tariby, ary amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo rafi-pandaminana manan-tsaina dia apetraka amin'ny fitaovana tsirairay ireo sensor mba hanangonana am-pahakingana ny angon-drakitra sy hifehezana ny toe-pahasalaman'ny fitaovana amin'ny fotoana tena izy. Ny mpamboly anaty tany lalina lalina FS550 sy mamaha ny fambolena dia afaka mamita irery ny asa fambolena miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy. Amin'ny lafiny iray, mampihena ny hamafin'ny asa ataon'ny mpandraharaha izany, ary amin'ny lafiny iray, manala ny famerana ny fiasan'ny tontolo iainana ivelany izy. Izy io dia afaka mahatsapa ny fandehanana maharitra amin'ny toetr'andro, izay manome antoka matanjaka amin'ny fananganana fotodrafitrasa amin'ny fambolena manan-tsaina any Shina.
Ny teknolojia famafazana lalina sy fanosehana ny tany dia nampiroborobo ity indray mitoraka ity amin'ny alàlan'ny fomba fambolena, fambolena, fiompiana ary ny fambolena. Izy io dia afaka mamita ny asa fanomanana ny tany indray mandeha nefa tsy manapotika ny sosona tany, manolo ny asan'ny mekanika maromaro teo aloha. Izy io dia afaka mampihetsika ny tany lalina, mamonjy rano, zezika ary angovo, izay hampiroborobo ny fitomboan'ny vokatra sy ny fidiram-bola.